ဒီစာကို ရေးခြင်လို့အကြံပေးကြပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ဒီစာကို ရေးခြင်လို့အကြံပေးကြပါ။
Posted by same kyaw on Jun 29, 2012 in Complaint / Claim | 28 comments
ဒီစာကုိ ေရးျခင္လို႔ အဳကံေပးဳကပါ
မနေ့က အီဂျစ်ပြည်က မြန်မာသံရုံး ရှေ့မှာ အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့တွေက မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတွေကို နှိပ်စက်လို့ဆိုပြီး ဒီပုံတွေကိုင်ထားပြီးဆန္ဒပြတယ်လို့သိရပါတယ်
သိရင်ပြောကြပါ ဒီပုံက မြန်မာပြည်မှာ ရိုက်တဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အကြံပေးကြပါ။
မြန်မာပြည် မှာ ဒီလို ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး သေနတ်ကိုင်တာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဘူးပါဘူး ။ အကြီးချဲ့ ကြည့်နိင်ရင်တော့ တပ် ယူနီဖောင်းကြည့်လိုက် သိတာဘဲ ။
လုံခြုံရေးတွေရဲ့ uniform တွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရဲ၊ လုံထိန်း၊ တပ်မတော်ရဲ့ uniform တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုင်ထားတဲ့ သေနတ်ကလည်း မြန်မာလုံခြုံရေးတွေ ကိုင်လေ့မရှိတဲ့ M16 ဖြစ်နေပါတယ်။
အီဂျစ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အဲ့ဒီစာရွက် ကို ကိုင်ပြီး အီဂျစ်က မြန်မာသံ ရုံးကို သွားပြီဆန္ဒပြတယ်တဲ့ ။မြန်မာတွေ ကမာ္ဘကို သိအောင်တောင်းပန်ရမယ်လို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့။ဒီနေ့သောကြာနေ့ဘယ်လို လုပ်အုံးမလဲမသိသေးဘူး။ဒီနေ့စောင့်ကြည့်ရအုံးမယ်။
အယ် ဘယ်လိုဂျီးလဲ ….
ရခိုင်မှာ ရခိုင် မြန်မာတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကို နှိက်စက်တယ်။သတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေ လုပ်ကြံတွေပုံနဲ့တောင်းဆိုတာလေ
ဟဲ့!! ဇောက်ထိုး ……….
ဒီပုံက မြန်မာပြည်ကပုံမဟုတ်ဘူး တခြားနိုင်ငံက ပုံတွေကိုကိုင်ပြီး မြန်မာပြည်ကလိုလို လုပ်နေတာ
ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံတွေ နဲ့ အီဂျစ်က မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာတဲ့ ဒီနေ့တော့ သောကြာနေ့ဘယ်လို ဖြစ်မလဲမသိဘူး။ဒုက္ခ ဒုက္ခ
အဲ ဒီစာ ကို ရေးချင် နေတယ် ဆိုရင် မရေး ပါနဲ့ တော့။
သက်ဆိုင်သူ တာဝန်ရှိ သူတွေ တရားမျှ တစွာ လုပ် ဆောင်သွားမှာ မို့ ဘာမှ မပူပင် ပဲ နေ နေ လိုက်ပါ။
နိုင်ငံတကာ စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြနေကြတာ တွေ က လုပ် ကြံ တာလား တကယ်လား ဆို တဖြေးဖြေး ရုပ်လုံး ပေါ်လာပါပြီ။
ခု ဆို မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ BBC, BOA နားထောင်သူ ထက်ဝက်လောက် လျော့ ကျ သွားတယ် ဆိုပဲ။
MW, SW ရတဲ့ ရေဒီ ယို တွေ တောင်အရောင်းပါး သွား လို့ ရေဒီယို လက်ဝယ်ရှိ အီလက်ထရောနစ် ဆိုင်တွေ ငြီးနေ ကြတယ် လို့ ပါးစပ် သတင်း တခု က ကြားသိရတယ်။
အခုမှ .. ရခိုင်မှာပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားရပ်တည်နေရတဲ့ အချိန် မိမိကြောင့် နောက်ထပ် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှူတွေ မဖြစ်ရေးက အရေးကြီးပါတယ် … ။
စဉ်းစား ချင့်ချိန်နိုင်ကြပါစေ ။
မဟုတ်ဘူး ရိုဟင်ဂျာတွေက လိမ်လွန်းအားကြီးနေတယ် ။ဒေါသ အတောင့်လိုက်ထွက်နေတယ် မြန်မာပြည်မှာနေပြီး ကျေးဇူးကိုသိတတ်ရမှာပေါ့ ။
သောကြာနေ့ ဘာ ဖြစ်ရမှာ လဲ … ငါ … ဆဲ လိုက် ရ… အားအားနေ. ဘာ မဆိုင် ညာမဆိုင် သောကြာနေ့ကို လာ လာ ထိခို်က်နေကြတယ်… စားဖို့ သောက် ဖို့ လုပ် နေရတယ်ဟေ့…. အလေနတောတွေ မဟုတ်ဘူး.. ဖြစ် ချင် ရင် ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် ဖြစ် ကြ ..သူ့ ဟာသူ ဘယ် မှာ ပဲ ဆန္ဒပြပြ ဆန်ပြုတ်ပြပြ…. သောကြာနေ့ဘာ မှ ဖြစ် စရာ မလို ဘူး… သိကြပြီ လား.. အရပ် ကတို့ ရဲ. …သတ် ချင် တဲ့သူ သတ် ရိုက် ချင် တဲ့ သူ ရိုက် ကြ…. မဖွ ကြ နဲ့ ဒီ ပေါ်တက် တက် ပြီး……
ဟုတ်ပဗျာ ပို ့စ်ရှင်ကြီးရေ ဒီပုံကို ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုင်ထားတယ်ဆိုရင်လဲ
နော်။မည်းမည်းတွေ အစား ဖြူဖြူတွေဖြစ်နေတော့ ခင်များဘဲရူးသလား၊
နောက် ထပ် ပြီးပြောလိုက် မယ်.. သတင်းသိချင် ရင် တိ တိ ကျကျစုံ စမ်း … ဒီပုံ က အီ ဂျစ်မှာ ဆန္ဒပြ လို့ ဖမ်းလိုက် တဲ့ ပုံ တွေ…. သိပလား သိပလား….
အခု ချိန် မှာ အဲ့ ဒါနဲ့ ပတ် သတ် ရင် ပြန်လည်ထူထောင် ရေးက လွဲ ပြီး ဘာမှမတင် တာ အကောင်းဆုံးပဲ ….
ဘာ ဖြစ် ဖြစ် ဘာ အကျိုးမှပေးမှာ မဟုတ် ဘူး… ဒေါသထွက်နေတဲ့ ကို ရင် က လဲ ဒေါသတောင့် လေးကိုခေါက် သိမ်းထားလိုက် ပြီး… တာဝန် ရှိသူတွေ မျှမျှတတမှန်မှန် ကန်ကန် လုပ် ပါစေလို့ ဆုတောင်းပြီ. မေတ္တာပို ့ပေးနေနော်….
သတင်းထောက်တွေကိုပြဿနာဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးသွားပြီး သတင်းတွေကို တီဗီ ကနေ Live လွင့်ပေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာက ဘာမဆို Rumor တွေအရမ်းများပြီးဘယ်သူမှသတင်းမှားတာ မှန်တာကိုမသိတာကပြဿနာ (Except ကောလဟလ ဖန်တီးသူမှလွဲ၍)။
အော် ဒါကာမ သဲနုရယ်
မဲမဲဖွေးဖွေး ကိုယ်တော်ရဲ့ သားတော်သမီးတော်ကြီးပါဘဲ
ဟယ်နာမည်ပြောင်းပြန်ပီ။ အဒူလဲရှင်းရှားလို့အရဘူးရယ်။ အာဗာတာပါပြောင်းထားတယ်။
နောက်တခါဒီလိုသတင်းတွေ မတင်တော့ပါဘူး။ဘာရယ်မဟုတ် သတင်းထဲမှာတွေ့လို့တင်တာပါစိတ်ဆိုးကြရင် sorry ပါ။
ဒီပုံတွေကိုက အီဂျစ်မှာ ဆန္ဒပြ နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရခိုင်ကပုံမဟုတ်ဘူးလေဗျာ.. သေချာဖတ်ပါဦး သတင်းကို။
ဒီစာကို ရေး ခြင် လို့ဆိုရင် နင့်ကို ကိုက်လိမ့်မယ် .. ခြင်ထောင်ထဲ ဝင်ရေး ..
တကယ်မရေးတင်ရသေးတာ ကံကောင်းတယ်ဗျို့ ။
အခုအချိန်မှာ အခြေနေတင်းမာမှုတွေရှိနေတုန်း ဖြစ်နိုင်လျှင် အဲ့ဒီအကြောင်းတွေ မတင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ အလကားနေရင်းမှ အရူးထနေတာ ၊ ဒီပုံတွေ မြင်လျှင် စဉ်းစားဉာဏ်မဲ့ပြီး ဘာတွေထလုပ်ဦးမလဲမတွေးရဲတော့ဘူး ။ အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မယ် ။
ဟုတ်တယ်။နာမည်ပြောင်းထားတာ။အကောင့်တွေ သူများဝင်ဖျက်လို့ အသစ်ပြန်လုပ်ထားတာ။ခုတော့ပုန်းနေလိုက်အုံးမယ်။နောက်မှ ပြောမယ်။